Mmetụta Digg: Mmechi ... O Na - enyere Aka? | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 5, 2006 Thursday, January 5, 2017 Douglas Karr
Mgbe m gwa a na-akpa ọchị video banyere Bill Gates na Napoleon Dynamite, ebum n’uche m bụ ịhụ mmetụta Digg nwere ike igosi ndị ọzọ blọgụ m. Nakwa, ebumnuche m bụ igosipụta nsonaazụ nke "Digg Effect". Noah na Okdork na-eme ka m n'eziokwu na nke a.
"The Digg Effect" bụ katapila na akụ na saịtị gị na-enweta mgbe ị nyefere akụkọ site na Digg na "Diggers" ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Ajụjụ kachasị bụ ma ọ ga-eme onye ọ bụla dị ka m mma ọ bụla? (Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ Akụkụ nke mbụ nke ule a, pịa Ebe a).
Ndekọ ọnụ ọgụgụ (Digg Effect bụ nnukwu ibiaghachi):
M nwere ike na-akuko a ụbọchị n'isi… ị ga-achọpụta nke ikpeazụ mgbe na chaatị bụ nnọọ ala. Nke ahụ bụ n'ihi na akọpụtaghị stats ụnyaahụ.
Otu izu mgbe m nwetachara, m ka na-enweta aghụghọ aghụghọ site na Digg. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ nke nleta ọtụtụ na nke nleta oge mbụ sitere na 6.38% gaa na 11.77%. Nke ahụ pụtara na ụfọdụ “ndị na-egwu ala” m “gwuru” ebe m. Nakwa, ọnụọgụ ndị edenyere aha na ndepụta m okpukpu atọ ma na-agụ kwa ụbọchị (stats site Feedpress). Na mkpokọta, ọnụọgụ ndị ọbịa na saịtị m kwa ụbọchị bụ 300%. O siri ike ịhụ na grafụ ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ na-agbapụta iji kpuchie ihe omume Digg… mana omume mgbe ihe omume ahụ dị ntakịrị.
Nke a ọ bụ ihe ọma? Ikekwe! Site na mmadụ 4,000 ndị na-adịghị mma bịara na saịtị m n'oge mmemme Digg, enwere m ike ịgbakwunye 100 ọzọ ma ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ na saịtị m kwa ụbọchị. Aghọtaghị m, nke a bụ ọnụego njigide dị egwu. Otu akụkụ, n'ihi na obere akụkụ nke ndị na-ekiri vidio ahụ nwere ike ịmasị na blọọgụ m. Ọ dị ka ịkwusa Yoga Studio gị na akwụkwọ akụkọ. Chọpụta, a nde folks nwere ike ilekiri na ad… ma fọrọ nke nta ka ha niile ga-ịma.
M ga-eme ya ọzọ?
Ikekwe. Echere m na m ga-achọ izere vidiyo ndị na-adịghị mkpa nye ndị na-agụ akwụkwọ / ndị debanyere aha m. Ọ bụrụ na m nwere video nke ihe metụtara Marketing, akpaaka, ma ọ bụ Indianapolis… M ga-eleghị anya na-ohere nke ili m na saịtị ọzọ. Na mpụga nke ahụ, agbanyeghị, anaghị m echegbu onwe m gbasara ikpughe blog m nye ndị na-anaghị enye akwụkwọ.
Tags: mmetụta dị icheigwu
Mgbe Psychopaths na-aga Ọrụ
Aug 5, 2006 na 1: 11 AM
nnukwu ịgbaso. ekwere m kpamkpam banyere mkpa ọ dị. obi dị m ụtọ na ụfọdụ dị ka mụ onwe m nọgidesiri ike ma nwee ọ readingụ ịgụ ọkwa gị.
Aghọtara m na nke a bụ ọkwa ochie. Ekwenyere m na nkwupụta na peeji nke echiche na ndị ọbịa pụrụ iche na saịtị ahụ mgbe ị gwuru post ahụ. Ma gịnị banyere àgwà ahụ? Ndị ọbịa a ọ na-alọghachi ma ọlị? Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ọnụego ntụgharị.
Onwe m, echeghị m na àgwà dị ebe ahụ. Ọ bụ otu mmejọ m nwere na Digg, edemede ha dị oke egwu na isiokwu ahụ abụghị maka ndị na-ege ntị. Offọdụ n'ime saịtị ndị ọzọ na-edebanye aha na ibe ha na-arụ ọrụ ka mma n'ịchọpụta ihe nwere ike ịdọrọ, mana ọ bụghị Digg.
Mgbanwe ntụgharị dị n'elu bụ ihe na-erughị 0.25%. Ugwu ahu gara n'ihu na-ewetara ndị na-agụ akwụkwọ akwụkwọ mgbe ha gwusịrị ya, yabụ, ya mere m jiri were atụmatụ 'pere mpe'.